बर्गरभन्दा बढी स्वस्थ हुन्छ समोसा, यस्ता छन् कारणहरु…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
बर्गरभन्दा बढी स्वस्थ हुन्छ समोसा, यस्ता छन् कारणहरु…हेर्नुहोस् ।
से’न्टर फर साइन्स एण्ड इन्भायरमेन्ट (सिएसई) नामको अनुसन्धान केन्द्रले केही समय अगाडिको स’मोसा र बर्गरमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट ब’र्गरको तुलनामा समोसा खानु बढी स्वास्थ्यबर्द्धक देखिएको छ । अनुसन्धानमा स’मोसा बनाउने विधिमा ताजा र केमिकल मुक्त तरिका रहेको पाइयो । शुद्ध गहुँको आँटा, उ’सिनिएको आलू, केराउ, नुन, मरिच, मसाला, खुर्सानी र सब्जीको तेल वा घिऊ जस्ता वस्तुहरु समोसा बनाउँदा प्रयोग गरिएको पाइयो ।
यिनीहरु स्वा’स्थ्यका लागि हानिकार’क छैनन् । तर, बर्गर बनाउन शुद्ध गहुँको आँटा चिनी, गहुँको लस, भेजिटेबल तेल, यिस्ट, नुन, भटमासको आँटा, तिलको दाना, सब्जीहरु, मायोनेज, पनिर र आलुलगायतको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यिनीहरुमध्ये कतिपय वस्तुहरु स्वा’स्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैनन् ।
कति खानेरपिउने: नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ अल्कोहल अब्युज एण्ड अल्कोहोलिज्मका अनुसार कुनै पनि मादक पदार्थमा सेवन गर्दा १४ ग्राम पिउनु उचित हो । त्यसलाई स्टान्डर्ड ड्रिंक्स् भनिन्छ । अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन तथा अमेरिकन डाइबिटिज एशोसिएसनका अनुसार ह्विस्कि, स्पिरिट सेवन गर्ने हो भने ४५ मिलिलिटर, बियर ३४० मिलिलिटर र वाइन, साइडर १४० मिलिलिटर पिउनु उपयुक्त मानिन्छ ।
४५ वर्षमाथिका स्वस्थ शरीर भएका महिलाले दैनिक एक र पुरुषहरुले दिनको दुई पटक ड्रिंक्स गर्न सकिने सल्लाह दिइएको छ । कुनै पनि खानेकुरा खाँदा थोरै–थोरै मात्रामा धेरै पटक खानु राम्रो मानिन्छ । सागपात र फलफूलसहितको सन्तुलित खाना उपयुक्त हुने पोषणविदहरुको सुझाव छ । अत्यधिक चिल्लो, मसलेदार बोसोयुक्त खानाले ग्याष्ट्रिक बढाउने, अपच गराउने गर्छ । यसरी नै बासी खाना, काँचो मासु खाँदा फुड प्वाजन हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ ।
बि’रामीले के गर्ने: म’धुमेहका बिरामीले मदिरा सेवन गर्नुपूर्व धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ । अमेरिकन डाइबिटिज एसोसियसनले र’गतमा सुगर अनियन्त्रित छ भने मदिरा वर्जित गरेको छ । एक–दुई पटक मदिरा पिउँदा डाइबिटिजका बि’रामीको र’गतमा सुगरको मात्रा बढाइदिन्छ । यति मात्र होइन कति बिरामीमा सुगरको मात्रा धेरै कम पनि गराइदिन सक्छ ।
मदिरा सेवन गरेपछिको २४ घण्टासम्म र’गतमा सुगरको मात्रा कम गराउन सक्छ। रगतमा सुगरको मात्रा चाहिनेभन्दा कम भएमा मानिसको मृत्यु समेत हुन्छ । त्यसैले मदिरा पिउने नै हो भने मदिरा सेवन गर्नुपूर्व सुगरको अवस्था कस्तो छ भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ । मदिरा सेवन गरेको बेला रगतमा सुगरको मात्रा १०० देखि १४० भित्रै राख्नुपर्ने अमेरिकन डाइबिटिज एसोसिएसनको सल्लाह छ।
डाइबिटिजको बिरामीले मदिरा सेवन गर्नुपरेमा खाली पेटमा पिउनु हुँदैन । साथै, कुनै पनि मदिरा सेवन गर्दा विस्तारै र डाइट सोडा वा पानीसँग मिसाएर मात्र पिउनुपर्छ । मुटुरो’ग भएका बिरामीहरुले मदिरा सेवन गर्दा मु’टुको चाल गडबडी हुने, र’क्तचाप अनियन्त्रित हुने, मुटुको काम गर्ने क्षमता कमजोर हुने आदि समस्या हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्यसैले यस्ता बिरामी मदिरा सेवनबाट टाढा रहन नै राम्रो भएको उनीहरुको सुझाव छ ।
रातो मासु र मदिराको अत्यधिक सेवनले र’गतमा कोलेष्ट्रोल तथा यु’रिक एसिड बढाउने गर्ने हुनाले मासु खाँदा चारखुट्टे जनावरको भन्दा कुखुरा, हाँसको मा’सु र माछा खानु राम्रो हुन्छ । सफ्ट ड्रिंक्समा हुने अत्यधिक गुलियोपनले पनि ग्या’ष्ट्रिक गराउने, मोटोपन बढाउने तथा र’गतमा ट्राइग्लिसेराइड जस्ता कोलेष्ट्रोलको मात्रा बढाइदिने भएकाले यस्ता पेय पदार्थभन्दा सादा पानी पिउनु नै उत्तम हुन्छ ।
कि’न खाने काँ’चाे केरा ? काँचो के’रा सम्बन्धी केहि उ’पयाेगी जा’नकारी ! केरा अर्थात सदाबहार फल । बजारमा केरा बाह्रैमास पाइन्छ । कसैलाई कमजोरी भयो र तत्काल इनर्जी चाहियो भने एउटा केरा क्वाप्प खाँदा हुन्छ, केही मिनटमै शरीरको कमजोरी हराइहाल्छ । केरामा भएका तत्वहरु तत्काल श’रीरले ग्रहण गरीहाल्छ, यसलाई पा’चनको लामो प्रकृयामा अल्झीनै पर्दैन ।
यही कारण केरा किलोको भाउमा हैन, दर्जनको भाउमा बिक्छ । किनकी, केराका गुण पनि दर्जनौं छन् । पाकेको केरामा अत्याधिक पोषणतत्व पाइन्छ । केरामा आइरन, क्याल्सियम तथा भिटामिन प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । यो त पाकेको केराको कुरा भयो । काँचो केरा पनि कम हितकर छैन । काँचो केरा खाँदा शरीरमा आइरनको पुर्तिमात्र गर्दैन, कयौ रो’ग लाग्नबाट बचाउँछ । काँचो केराका फाइदा-
Posted in शिक्षा र स्वास्थ
Prevघिउकुमारी पा’यल्सको बिरामीको लागि अचम्मको फाइदा, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग । पूरा पढी सेयर गरौ !
Nextकालापानी–लिम्पियाधुरा विवाद : नेपालले जुटायो ऐतिहासिक प्रमाण…हेर्नुहोस् ।
एमाले बैठकमा सहभागी हुन वामदेव गौतम बालुवाटारमा
टिभी जर्नलिष्ट पाण्डेको योगदानलाई चीर स्मरणीय राख्न एनबीसीद्वारा पुरस्कारको घोषणा…हेर्नुहोस् ।
अम्बाको पातको रसले शरीरलाई गर्छ यस्तो अचम्मको फाइदा…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
नेकपाभित्रै बाट उठ्न थाल्यो प्रचण्डको रा जीनामा माग …हेर्नुहोस!